NISA: Dekadda Muqdisho waa isha qaraxyada Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Booliska, Maamulka Dekadda iyo qeybta Canshuuraha ee Wasaaradda Maaliyadda DF ayaa caqabad ku ah in la baaro kunteenaradda maadooyinka qaraxyada ku jiraan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hay'adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saartey ku sheegtay in Dekadda Muqdisho ay noqotay isha qaraxyada uga soo degaan Kooxda Al-Shabaab.
Taliska qeybta Sirdoonka gobolka Banaadir ayaa ogeysiiyay warkan Wasaaradaha Amniga, Maaliyadda, Taliska Booliska iyo Maamulka Gobolka Banaadir, iyagoo lagu wargeliyay khatarta amniga ee ka dhalan karta, hadii aan la baarin kunteenaradda lagu soo qariyo maadooyinka qaraxyada laga sameeyo.
NISA ayaa sheegtay in sanadkan gudihiisa ay ku qabteen Dekadda 10 kunteenar, oo qaarkood laga helay 78 mitric tonne oo maadada Sulfuric Acid, oo qaraxyada loo adeegsado, waxaana xabsiga la dhigay ganacsatadii soo dejisay, oo doonayay inay usii gudbiyaan Al-Shabaab.
"Waxaan caddeynaynaa in Taliska NISA qeybta gobolka Banaadir uusan qaadi doonin mas'uuliyadda amni darro ka dhalan doonta dekadda Muqdisho," aya alagu yiri warka ay soo saartey NISA, kaasoo sidoo kale lagu xusay in Al-Shabaab ay galaan-gal u yeelatay inay dalka soo geliso waxyaabaha qaraxyada laga farsameeyo, iyadoo ay usoo marayaan ganacsato.
Qoraalka NISA, oo wali lagu baahin warbaahinta dowladda iyo baraha ay ku leedahay Social Media, ayaa Keydmedia Online isku dayaysaa inay ogaato sunnaantiisa, maadama wali si rasmi ah loo shaacin.
0 Comments Topics: al-shabaab dekada muqdisho nisa
Tan iyo June 26 ayaa la weysanaa Gabadhan NISA katirsanayd, islamarkaan xog xasaasi ah ka heysay dilkii Eng Yariisow iyo Wiilasha loo diray Eritrea.